राष्ट्रपति बारपाकमा : भूकम्प स्मृति उद्यानको शिलान्यास
२०७३ बैशाख १२ आइतबार, बारपाक, गोरखा । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट गत वर्ष वैशाख १२ को ‘गोरखा भूकम्प’ को केन्द्रविन्दु रहेको बारपाकमा भूकम्पस्मृति उद्यानको शिलान्यास भएको छ । राष्ट्रपतिले भूकम्पमा परी निधन भएकाहरुको सम्झनामा जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले निर्माण गर्न लागेको स्तम्भको समेत शिलान्यास गरिन‍् । बारपाक वडा नं ४ र ५ को केही भाग समेटेर भूकम्पस्मृति उद्यान निर्माण हुन लागेको छ । यसअघि जिविसले बोटबिरुवा हुर्काएर उद्यान बनाएका ठाउँमा मृत ... बाँकी अंश»
सरकारकै प्रवक्ता भन्छन्, ‘पुनःनिर्माण र कालोबजारी नियन्त्रणमा घुँडा टेक्यो सरकारले’
२०७३ बैशाख १२ आइतबार, भक्तपुर । सूचना तथा संचार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले सरकारको आलोचना मूल दुई बिषयमा हुने गरेको बताएका छन् । भक्तपुरमा आइतबार कल्पना स्मृती कोषको स्थापना गर्दै मन्त्री राईले सरकारले पूनःनिर्माणको कामलाई गति दिन नसकेको र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न असफल भएकाले सरकारको आलोचना हुने गरेको बताए । मन्त्रीराईले यस्तो बेलामा सरकारले घुँडा टेक्न नहुने समेत सुनाए । मन्त्री राईल भने, ‘नेपाल सरकारले वैशाख १२ बाटै पूनःनिर्माणको कामलाई ... बाँकी अंश»
माइला लामाकाे गिरफ्तारीसंग जोडियो ठगिको जालो
२०७३ बैशाख १२ आइतबार, काठमाडौं । नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा जनकलाकार माइला लामाको गिरफ्तारीको विरोध गर्दै सो पार्टीले बिनासर्त तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ । शनिबार साँझ पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रम सकेर निस्किरहेका बेला कपनबाट लामा र विद्यार्थी नेता चिरञ्जीवी ढकाल लगायत कार्यकर्ता पक्राउ परेका थिए । उनीहरुलाई हाल तीनकुने प्रहरी वृत्तमा राखिएको छ । छ मध्ये दुई जनालाई नियन्त्रणमै राखिएको छ । एक जापानी संस्थासँगको विवादको विषयमा मुद्दा परेपछि उनीहरु ... बाँकी अंश»
प्रधानमन्त्री ओलीलाई कालो पिण्ड, पिण्ड दिनेलाई प्रहरीको डण्डा
२०७३ बैशाख १२ आइतबार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अहिलेको सरकार जनताको नजरमा मरिसके सरह भएको भन्दै आज राजधानीमा प्रधानमन्त्रीलाई कालो पिण्ड दिईएको छ । विवेकशील नेपाली दलको आह्वानमा राजधानीको धरहराबाट कालो कपडा लगाई क्रियापुत्रीको रुपमा पिण्ड लिएर सिंहदरवार अगाडी आएर कालोपिण्ड चढाईएको हो । धरहराबाट रत्नपार्क हुदै सिंहदरवारको पश्चिमी गेट अगाडी भद्रकालीनजिक प्रधानमन्त्रीलाई पिण्ड चढाईएको दलका अध्यक्ष उज्जल थापाले जानकारी दिए । उनले धरहराब ... बाँकी अंश»
बैशाख १२ लाई यसरी सम्झिदा... (भिडियो)
२०७३ बैशाख १२ आइतबार, काठमाडौ। यो श्रव्यदृश्य केही समय अगाडि भूकम्पको पीडा बोकेर काठमाडौंमा चहार्दै आएका एक गाईने दम्पत्तिको हो। मलीन मन लिएर घरघरमा आएका यी भूकम्पपीडित भावनात्मक सहयोगको भिक्षा माग्दै भूकम्पको सम्झना गराउँदै हिँडेका छन्। भूकम्पको पीडामाथि सारंगीको सुमधुर संगीतको मल्हम लगाउने यी सारंगी पनि सिन्धुपाल्चोकमा भूकम्पले देखाएको विभत्स विनासबाट आफूले भूकम्पको गीत गाउन थालेको बताउँछन्। मानवीय संवेदना तथा सम्झिएरै पनि ती विभत्स तस्बिर मनबाट हटा ... बाँकी अंश»
नेपालद्वारा जलवायू परिवर्तनबारे पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर
२०७३ बैशाख ११ शनिबार, काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले शुक्रवार जलवायु परिवर्तनबारेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिअन्तर्गतको पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । हस्ताक्षर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव वान कि–मुनले राष्ट्रसङ्घ मुख्यालय, न्यूयोर्कमा आयोजना गर्नुभएको ऐतिहासिक हस्ताक्षर समारोहमा भएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोग न्युयोर्कबाट प्रकाशित विज्ञप्तिअनुसार हस्ताक्षर समार ... बाँकी अंश»
भिजुला प्रान्तको लोकतन्त्रको कथा
२०७३ बैशाख ११ शनिबार, पश्चिम विश्वको एउटा ज्यादै सुन्दर बस्ति, सबैकोबीचमा आपसी सद्भाव र भाइचारको भाव, सबैकोबीचमा एकले अर्कालाई श्रद्धा गर्ने चलन थियो। ज्यास्किस फरेन त्यहाँ सबैले मर्दापर्दाको लागि भनेर समाजको एउटा प्रमुख व्यक्तिको रूपमा तोकिएका व्यक्ति थिए। उनी मात्रै होईन, उनको पुख्यौली पेशा नै त्यही थियो। उनीहरूलाई नगर प्रमुख तोक्ने बेलामा न त कसैसँग कुनै झगडा हुन्थ्यो न त कुनै मतभेद नै थियो। उनीहरूको व्यहार पनि त्यस्तै थियो। कोहीकसैप्रति विभेदकारी दृष्टिले कहिल ... बाँकी अंश»
कनकमणि दीक्षित अस्पताल भर्ना
२०७३ बैशाख ११ शनिबार, काठमाडौँ । भ्रष्टाचारको आरोपमा शुक्रबार अख्तियारले पक्राउ गरेका साझा यातायात सहकारीका अध्यक्ष एवं पत्रकार कनकमणि दीक्षित अस्पताल भर्ना भएका छन् । दीक्षितलाई अनियन्त्रित उच्च रक्तचाप भएपछि विहान १० बजेतिर अस्पताल भर्ना गरिएको महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालाका प्रहरी प्रमुख डिएसपी नवराज कार्कीले जानकारी दिए । उनी शुक्रबार देखि नै गौशाला प्रहरीको हिरासतमा थिए । अहिले उनलाई उपचारको लागि वीर अस्पताल लगिएको छ। दीक्षितलाई तीन दिन हिरासतमा रा ... बाँकी अंश»
राजदूत बन्न नदिने काँग्रेसको यस्तो कसरत
२०७३ बैशाख ११ शनिबार, काठमाडौं । सत्ताधारी प्रमुख दलहरुले आफुखुसी भागबण्डा गरेर राजदूत नियुक्तीका लागि सिफारिस गरेपछि चिडिएको नेपाली काँग्रेस भित्र सरकारको सिफारिस असफल बनाउने रणनितिका बारेमा छलफल हुन थालेको छ । पार्टीकै नेताहरुले खुलेआम रुपमा सिफारिसको बारेमा चर्को असन्तुष्टी व्यक्त गरिरहेका बेला काँग्रेस निकट केही कुटनितिज्ञहरुले भने संसदीय सुनुवाई विषेश समिति मार्फत् केही व्यक्तिलाई चिप्ल्याउने तयारी गर्न लागेका छन् । काँग्रेसकै नेताहरु भने यसमा संलग्न नर ... बाँकी अंश»
जनताले जितेको दिनको सम्झना
२०७३ बैशाख ११ शनिबार, काठमाडौं । जनताको संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै लोकतान्त्रीक संविधान कार्यान्वयन र पुर्ननिर्माण मार्फत् मुलुकलाई संबृद्धि तर्फ लैजाने अवको अविभारा पुरा गर्न लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा सवैलाई जोश र हौसला मिलोस् भन्ने हार्दिक शुभकामना छ । आज भन्दा ठिक १० बर्ष अगाडी आजकै दिन १९ दिने जनआन्दोलनबाट आत्तिएर तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता दिएको भन्दै आफ्नो सक्रिय शासनबाट पछाडी हटेका थिए । ... बाँकी अंश»
सुशीला कार्कीले मागिन् राजदूत नियुक्तिको कारण
२०७३ बैशाख १० शुक्रबार, काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले २१ राजदूत नियुक्तिविरूद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीस सुशीला कार्कीको एकल इजलासले सरकारको निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । सरकारले गत मंगलबार सिफरिस गरेको राजदूत नियुक्तिको सिफारिस नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा ३८(४), धारा ४०(१), धारा ४२(१) र धारा २८२ विपरित रहेको आरोप लगाउँदै अधिवक्ता रक्षाराम हरिजन (चमार)ले दायर गरेको रिट उपर आ ... बाँकी अंश»
तीन वर्षमा सबै भुकम्पपीडितको घर बन्छः प्रवक्ता थपलिया
२०७३ बैशाख १० शुक्रबार, काठमाडौ। राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले आगामि तीन वर्षभित्रमा सबै भुकम्प पीडितहरुको घर निर्माण कार्य सम्पन्न हुने दावी गरेका छन। साक्षात्कारमा उनले भने,‘ आगामि तीन वर्षभित्र सबै भुकम्प पीडितहरुको घर बन्छ। प्राधिकरणको अवधी पाँच वर्षको भए पनि चार वर्षभित्र यसले सबै काम सक्छ।’ साक्षात्कारमा प्रवक्ता थपलीयले मन्त्रीपरिषद सरह निर्णय गर्ने गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहेको निर्देशक समिति गठन गरिए ... बाँकी अंश»
पत्रकार कनकमणि दीक्षित पक्राउ
२०७३ बैशाख १० शुक्रबार, काठमाडौं। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्रकार कनकमणि दीक्षितलाई पक्राउ गरेको छ। शुक्रबार ललितपुरको पाटनढोका नजिकबाट पत्रकार दीक्षितलाई अख्तियारको विशेष टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो। विभिन्न शीर्षकमा अकूत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा अख्तियारले केही समय अगाडिदेखि उनीविरूद्ध अनुसन्धान गरिरहेको थियो। दीक्षितलाई अख्तियारको टोलीले पाटनढोका नजिकबाट नियन्त्रणमा लिएको ललितपुर प्रहरीले पुष्टि गरेको छ। दीक्षितलाई अहिले अख्तियारको हिरासतमा र ... बाँकी अंश»
सरकारमा जान हतारो छैन, भण्डाफोर गर्नुपर्छः गगन थापा
२०७३ बैशाख १० शुक्रबार, स्याङ्जा। नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा व्यवस्थापीका संसदको कृषी तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगनकुमार थापाले कालोबजारीलाई प्रश्रय दिने सरकारको भण्डाफोर अभियान चलाउनु पर्ने बताएका छन्। सरकार कालोबजारीमा लिप्त रहेको उल्लेख गर्दै नेता थापाले वर्तमान सरकारको भण्डाफोर अभियानमा लाग्न काँग्रेस कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिए। स्याङ्जाको क्षेत्र नं. २ नेपाली काँग्रेसले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलालाई सम्वोधन गर्दै थापाले कालोबज ... बाँकी अंश»
सरकार यस कारण गर्न चाहँदैन कर्मचारी निर्वाचन ?
२०७३ बैशाख ९ बिहिबार, काठमाडौ‌ । सरकारले तेस्रो पटक मिति सार्दै निजामति कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन जेठ १९ गतेको लागि तय गरेको छ । सरकारी खर्चमा गर्नलागिएको यो निर्वाचनको अभ्यास नेपालमा पहिलो पटक हुन लागिरहेको छ । यद्यपि, यस्तो ऐतिहासिक निर्वाचनको हुन नदिने षड्यन्त्र सरकारपक्षबाट नै हुँदा उक्त निर्वाचन हुनेमा भने शंका उत्पन्न भइरहेको छ । यसरी पहिलो पटक हुन लागिरहेको निजामति कर्मचारीहरू आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनबाट आफ्नो आधिकारि ... बाँकी अंश»
देउवाले दिल्ली वार्ता थाले, विदेशमन्त्री स्वराजसंग भेट
२०७३ बैशाख ९ बिहिबार, काठमाडौं । कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजबीच दिल्लीमा भेटवार्ता भएको छ । कांग्रेस सांसद एवं पत्नी आरजु देउवाको उपचारका लागि दिल्ली पुगेका देउवाले विहीबार विदेशमन्त्री स्वराजसँग भेट गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व सम्हालेपछि पहिलो पटक भारतमा पुगेका देउवा संसदीय दलको नेता समेत भएकाले उच्च तहका नेताहरुसँगको छलफललाई महत्जकासाथ हेरिएको छ । वर्तमान एमाले नेतृ ... बाँकी अंश»
भूकम्पपीडितको आक्रोस: ‘प्रकृतिले त हेपेकै थियो, राज्यले समेत उपेक्षा गर्‍यो’
२०७३ बैशाख ९ बिहिबार, सिन्धुपाल्चोक। भूकम्प गएको झन्डै एक वर्ष पुग्न लागेपनि जिल्लामा पुनःनिर्माणको काम अघि नबढेको भन्दै सिन्धुपाल्चोकका भूकम्पपीडितले सरकारप्रति आक्रोश पोख्न थालेका छन्। त्रिपाल र टिनको छानाको कष्टपूर्ण एक वर्षको बसाइपछि नयाँ घर बनाएर बस्ने पीडितको सपना यो वर्ष पनि पूरा हुने छाँटकाँट नदेखेपछि उनीहरुले आक्रोश पोख्न थालेका हुन्। आमजनता कष्टपूर्ण जीवन निर्वाह गरिरहे पनि सिन्धुपाल्चोकमा सरकारले पुनःनिर्माणका लागि ठोस काम अगाडि बढाउन सकेको छ ... बाँकी अंश»
सरकारको काम सन्तोषजनक छैनः सिटौला
२०७३ बैशाख ९ बिहिबार, विराटनगर। नेपाली काँग्रेसका पूर्वमहामन्त्री एवम् केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले वर्तमान सरकारको काम सन्तोषजनक नरहेको बताएकाछन्। प्रेस युनियन विराटनगरले आयोजना गरेको पत्रकारसम्मेलनमा सिटौलाले सरकारको आलोचना गरे हो। उनले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा सरकारको अग्रसरता एकदमै नरहेकोजस्तो देखिएको बताए। सिटौलाले देशमा अहिले रहेका मूलभूत मुद्दालाई लिएर नेपाली काँग्रेसले अग्रसरता लिने बेला आएको पनि बताए। नेपाली काँग्रेसले अन ... बाँकी अंश»
एमाले आफै भन्छ, 'यो सरकार भष्ट्रचारी हो' : गगन थापा
२०७३ बैशाख ९ बिहिबार, गुल्मी। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले वर्तमान सरकार भष्ट्रचारी र कालो बजारियाहरुले चलाएको आरोप लगाएका छन्। नेपाल विद्यार्थी संघ गुल्मीले आफ्नो ४६ औ स्थापना दिवसको अवरसरमा सुरु गरेको सविधान कार्र्यान्वयनका लागि दबाव अभियानको उदघाट्न गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन। ‘यो सरकार भष्ट्रचारी र कालोबजारियहरुको समूहले चलाएको सरकार हो’– उनले भने–‘यो मैले भनेको होईन, स्वयम सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेकै ठूलो समूहले भनेको हो।’ ... बाँकी अंश»
संघीय गठबन्धन अान्दाेलन : ‘अब देशभरबाट तुफान आउँछ’
२०७३ बैशाख ८ बुधबार, काठमाडौं । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सहितको संघीय गठबन्धनले देशभरबाट एक साथ आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । गठबन्धनले वुधबार आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भनेकामा मोर्चाका शीर्ष दुई नेता बैठकमा उपस्थित नभएपछि सार्वजनिक हुन सकेन । संघीय समाजवादी फोरमको कार्यालयमा मंगलबारबाट सुरु भएको बैठक वुधबार अपरान्ह सकिएको थियो । वुधबारको बैठकमा मधेसी मोर्चाका मुख्य दुई घटक तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र म ... बाँकी अंश»